Malunga ne-JBH-AnHui Jin Bai He Izixhobo zoNyango Co, Ltd.
AnHui Jin Bai He Medical Izixhobo Co., Ltd. yasekwa ngo-2013.
Inkampani esekwe kwimveliso ngokudityaniswa kwe-R & D, imveliso kunye namaqela okuthengisa amazwe aphesheya aneemveliso eziyilelwe kunye neemveliso ze-ODM zabathengi.
Iimveliso eziphambili kubandakanya iimaski zotyando, iilifti zesigulana, ibhedi yasesibhedlele. Zonke iimveliso zifumene izatifikethi ze-FDA, i-CE, kunye ne-CFDA yokuthengisa ngaphezulu kwamazwe angama-40 ehlabathini, egubungela amazantsi noMntla Melika, Australia, mpuma Asia, mpuma mpuma, HK, Macao, Taiwan kunye namanye amazwe.
Ukhenketho lweFektri Umgca wemveliso kaMaski Umsebenzi weqela Iindaba kunye neMicimbi
Ngo-2018, JBH isitulo esinamavili sathatha iR.POON MEDICAL COE CO. LTD. (Uniforce®️), uluhlu olwandisiweyo lweemveliso, ezinje ngePatient Lifter, iA Walking Aids, iimveliso ezinxulumene noKhuseleko kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela, njlnjl. kwaye ngoku kwiPhondo le-Anhui elinendawo ye-140,000 yeemitha zesikwere kunye namakhulu abasebenzi abaziingcali abanomoya weqela lokudibanisa, ukwanelisa, ukuqhelanisa nezinto ezintsha kunye nokuqhelaniswa kwabathengi, ngokuqhubekayo bephuhlisa iimveliso ezintsha zokuba negalelo labadala kunye nabasebenza ngezandla, ubomi obulula, obulula nobungcono.
▍ Umzi-mveliso kwiSixeko saseNanjing
Ifumaneka kwiSixeko saseNanjing, kwiPhondo iJiangsu (JBH kwiSitulo esinamavili) 12, 800 uMveliso weMveliso yokuvelisa.
▍ Umzi-mveliso kwisiXeko saseMingguang
Ifumaneka kwisiXeko saseMingguang, kwiPhondo le-Anhui (Uniforce®️) i-140, i-000 sq.
▍ Kutheni Sivelisa iimaski
Ngokwenyani njengomvelisi wezixhobo zonyango, i-JBH inabasebenzi bayo bhetyebhetye kunye nezixhobo ezininzi ze-R & D ukuseta umgca wemveliso yemaski yokulahla, kwaye iyenzile.
Iziko lemaski yotyando lakhiwa kumzi-mveliso weJBH Anhui, kwisixeko saseMingguang. Kwaye ngoku sinokubonelela ngaphezulu kweengcezu ze-3,000,000 ezikhuselekileyo nezineempawu zokulahla ezonyango ngoku. Awunakuba mathidala uku-odola. Nokuba kwenzeka nini xa wamkelekile kakhulu ukutyelela umzi-mveliso wethu.
▍ Iqela leR & D
Iminyaka engama-20 yeenjineli ezinamava kushishino.
Ukuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye nezinto ezenziwe ngokwezifiso.
Ukuphendula ngokukhawuleza kweemarike.
▍ Iqela lokuthengisa
I-24/7 yima ngenkonzo yabathengi.
Ixesha elifutshane lokuphendula.
Superior Zintle emva kwenkonzo yentengiso.
▍ Iqela lokusebenza
Izakhono zokusebenza zobungcali, iyalela ngaphezulu kwamaqonga ama-5 wenethiwekhi ukukhuthaza ukuthengisa kunye nokusasaza.
ophakamisa isigulana ngombane, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, iimaski ezilahlwayo, iimaski zobuso zonyango, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi,
ophakamisa isigulana ngombane, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, iimaski ezilahlwayo, iimaski zobuso zonyango,